ချယ်လ်ဆီးအနေနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား မရနိုင်တော့ကြောင်း ဝန်ခံသွားခဲ့တဲ့ တူချယ် – MyMedia Myanmar
ချယ်လ်ဆီးအနေနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား မရနိုင်တော့ကြောင်း ဝန်ခံသွားခဲ့တဲ့ တူချယ်
ချယ်လ်ဆီး အသင်းရဲ့ နည်းပြသစ်ဖြစ်သူ ပီအက်စ်ဂျီ နည်းပြဟောင်း သောမတ်စ် တူချယ် က ချယ်လ်ဆီး အသင်းအနေနဲ့ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် အမှတ်ပေးဖလားကို လက်လှမ်းမမီတော့ကြောင်း နဲ့ ရာသီကုန်ရင် ထိပ်သီး လေးသင်းထဲမှာ ပါဝင်ဖို့ကလည်း မသေချာနိုင်ကြောင်း ဝုလ်ဗ် အသင်း နဲ့ သရေရလဒ် ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်အပြီးမှာ ဝန်ခံပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ နည်းပြ တူချယ် အနေနဲ့ ချယ်လ်ဆီး နည်းပြဘဝ ပထမဆုံး ပွဲစဉ်အဖြစ် ဝုလ်‌ဗ် အသင်း နဲ့ ကစားတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်မှာ ဂိုးမရှိ သရေ ရလဒ် နဲ့ သာ အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ရမှတ် တစ်မှတ်သာ ရယူနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Photo Credit: Tallksport
ချယ်လ်ဆီး အသင်းအနေနဲ့ အမှတ်ပေးဇယား ရဲ့ အဆင့် ၈ နေရာမှာ ဆက်လက် ရပ်တည်ထားနေသေးပေမယ့်လည်း တူချယ် ကတော့ အသေးစိတ် လုပ်ဆောင်သွားမာ ဖြစ်ကြောင်း နဲ့ ချယ်လ်ဆီး ကို ဘယ်အသင်းကမှ ရင်ဆိုင်မကစားရဲတဲ့ အသင်းမ‌ျိုး ဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးသွားမာ ဖြစ်ကြောင်း ကတိပေး ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဝုလ်ဗ် နဲ့ ပွဲအပြီးမှာ သတင်းထောက်‌တွေက တူချယ် အနေနဲ့ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလားကို ရနိုင်မယ်လို့ ထင်လား ဆိုပြီး မေးခဲ့တဲ့ အခါမှာတော့ တူချယ် က “ အမှတ်ပေးဖလားလား ? ဝိုး၊ ခင်ဗျား သိလားဗျ အဲ့ဒါက အဝေးကြီးမှာ ရှိနေတယ်။ မရနိုင်ပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ လက်တွေ့ဆန်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ခင်ဗျား အနေနဲ့ ချယ်လ်ဆီး အတွက် ကစားသမားတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော့်လို နည်းပြတစ်ယောက် ခေါ်လိုက်တယ်‌ဆိုတာ၊ ခင်ဗျား အနေနဲ့ ဆုဖလားတွေကို စိန်ခေါ်ဖို့ အတွက် မျှော်လင့်ချက်‌တွေကို လက်မှတ် ထိုးလိုက်သလိုပါပဲ ”
“ ဆိုလိုတာက ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား၊ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား နဲ့ အခြားဖလားတွေ အကုန်လုံးကို ပြောတာပါ။ အဲ့ဒါက လုံးဝ ရှင်းပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ လက်တွေ့ဆန်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ နေရာ နဲ့ အဆင့်လေး နေရာအကြားမှာ အသင်းတွေ အများကြီး နဲ့ ရမှတ် ကွာဟမှုတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။ အကောင်းဆုံး အရာကတော့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှု ကို မဆုံးရှုံးပဲနဲ့ အဝေးကြီးကို မျှော်မကြည့်ဖို့ပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် နေ့စဉ်အခြေခံအရာလေးတွေမှာ အသေးစိတ်က အစ ဂရုတစိုက်လုပ်ရပါမယ်၊ ဒါမှသာ ရမှတ်တွေက နောက်ကလိုက်လာမာပါ။ ဒါက အခုမှ စမှတ်ပဲ ရှိ‌ပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ခွန်အားတွေ နဲ့ အရည်အချင်းတွေပေါ်ကို အာရုံစိုက်ရပါမယ်၊ ပြီးရင် ဘယ်အသင်းကမှ ရင်ဆိုင်မကစားရဲတဲ့ အသင်းမျိုး ဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ တည်ဆောက်သွားပါမယ်၊ ဒါဟာ စိန်ခေါ်မှုပါပဲ။ အဲ့ဒါကို မြန်နိုင်သမျှ မြန်မြန် လုပ်ဖို့က ကျွန်တော့်ရဲ့ တာဝန်ပါပဲ။ ဒီနေ့ အတွက်‌ကတော့၊ ကျွန်တော် အတော်လေး ကျေနပ်မိပါတယ် ” လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
The post ချယ်လ်ဆီးအနေနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား မရနိုင်တော့ကြောင်း ဝန်ခံသွားခဲ့တဲ့ တူချယ် appeared first on MySport Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-28T13:02:32+06:30January 28th, 2021|MYSPORT MYANMAR|